चिकित्सकविहीन उपक्षेत्रीय अस्पताल- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाका बिरामीले सहज उपचार पाउने एकमात्र डडेलधुराको उप–क्षेत्रीय अस्पतालमा चिकित्सक अभाव छ । चिकित्सक नहुँदा बिरामीले सहज रुपमा उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
४५ वर्षअघि अमेरिकी नागरिक डा. सिमनले स्थापना गरेको टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताल डडेलधुरालाई गाभेर सरकारले उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा गरेको ७ वर्ष हुँदा पनि अझै व्यवस्थित भएको छैन । ७ वर्षअघि सय शैय्याको अस्पताल घोषणा भए पनि चिकित्सक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा ८० शय्या मात्र सञ्चालनमा छ ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारले आफ्नो मातहत सञ्चालन हुने गरि घोषणा गरेका ५ सय शैय्याका ५ अस्पतालमध्ये यो पनि एक हो । संघीय सरकार मातहत यस अघि १४ अस्पताल थिए । गत आवमा सरकारले ५ अस्पताल थप गरेको थियो । जसमध्ये डडेलधुरा अस्पताल पनि एक हो । घोषणा गरेको एक वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म अस्पतालमा कुनै सुधार भएको छैन । भौतिक पूर्वाधारको समस्यासंँगै कर्मचारी समायोजनले यहाँ चिकित्सक छैनन् ।
‘पछिल्लो समय समायोजनका कारण चिकित्सक अभाव छ,’ अस्पतालका प्रमुख डा. जितेन्द्र कंँडेलले भने, ‘३८ चिकित्सकको दरवन्दी भएको अस्पताल जम्मा ५ जनाले सेवा दिनुपर्ने वाध्यता छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पदस्थापन भएको ठाउँंमा गएपछि अस्पतालमा चिकित्सक अभाव भएको कंँडेलले बताए । ‘३८ जनाको दरबन्दीमा १३ जनाले काम गरिहेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सक गएपछि जम्मा ३ जना मात्र वांँकि छौं ।’
समायोजनका कारण चिकित्सक मात्र होइन अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ । डा. कंँडेलले भने, ‘समायोजन भएका सवै स्वास्थ्यकर्मीले जानैपर्ने हो तत्काल समस्या नभए पनि धेरै समायोजनमा परेका कारण स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।’ ३० स्टाफ नर्सको दरवन्दी भए पनि धेरैजसो समायोजनमा परिसकेका छन् ।
१९ मेडिकल अफिसर र १८ कन्सलटेन्टको दरबन्दी रहे पनि स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पूर्ण हुन सकेन । यहाँ दैनिक ४ सय बढी विरामीले सेवा लिने गर्छन् । पटक–पटक डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा आक्रमणले पनि चिकित्सकहरू आउन नमानेको उनीहरू स्वयं वताउँछन् । सरकारले ५ सय शैय्याको अस्पताल घोषणा गरेको वर्षदिन बित्न लागेको छ ।
अस्पताल प्रशासनले भने यो विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी पाएको छैन । ‘यस विषयमा औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ डा. कँंडेलले भने, ‘सुन्नमा मात्र आएको हो तर मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको छैन ।’
प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:२७
नेपाल–भारत सीमाका ५७८/७, ५७८/१०, ५७८/७, ५७७/७ र ५७७/९ नम्बरका स्तम्भ ढलेका छन् । ५७७/९ नम्बर स्तम्भ बालुवामा धसिएको छ । ५७८/३ र ५७८/६ नम्बरका स्तम्भको जग खोतलिएको छ ।
भाद्र २, २०७६ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — एक महिनाअघि आएको बाढीका कारण यहाँका पाँचवटा सीमास्तम्भ ढलेका छन् । केहीमा क्षति पुगेको छ । ढलेका स्तम्भलाई भेलले दिनदिनै सार्दै लगेको छ । त्यसलाई उठाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
विजयनगर गाउँपालिकास्थित चिरई खोलामा चारवटा स्तम्भ ढलेका छन् । विजयनगर–५, ठकुरापुर र भारतको बलरामपुर जिल्ला गिद्धहवा सीमास्थित ५७८/७ नम्बरको स्तम्भ पानीमा ढलेको छ । त्यसभन्दा पाँच सय मिटर उत्तर ५७८/१० स्तम्भ लडेको छ । त्यसपछि ५७८/७ नम्बर स्तम्भभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणमा दुईवटा ढलेका छन् ।
विजयनगर–५, गेडुवाजोत र भारतको प्रतापपुरको सीमामा रहेको ५७७/७ र ५७७/९ नम्बरका स्तम्भ ढलेका छन् । ५७७/९ नम्बर स्तम्भ बालुवामा धसिएको छ । त्यसको टुप्पो मात्र देखिन्छ । विजयनगर–५ का रामबहादुर थापा ढलेका सीमास्तम्भ देखेर चिन्तित छन् । ‘भेलले दिनदिनै सार्दै लगेको छ,’ उनले भने, ‘पछि यही कुराले विवाद नबढोस् ।’
प्रहरी जवान परशुराम यादवले दैनिक आएर निरीक्षण गर्ने गरेको बताए । ‘५७७/७ नम्बर स्तम्भ पानीमा डुबेको छ,’ उनले भने, ‘बाहिरै देखिँदैन ।’ स्तम्भ ढलेको बारे जिल्लामार्फत हेडक्वाटरमा जाहेर गरिसकेको इलाका प्रहरी गणेशपुरका निरीक्षक सुमन नेपालले बताए । ‘छिटो मर्मत गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको माग त्यही छ ।’
उनका अनुसार ५७८/३ र ५७८/६ नम्बरका स्तम्भ पनि ढल्ने अवस्थामा छन् । जग देखिएको छ । बाढीले जग पुरेको माटो बगाएको छ । विजयनगर–१, चमरको जंगलमा रहेका दुई स्तम्भ क्षतिग्रस्त छन् । यसबारे स्थानीयले बुधबार जानकारी गराएका छन् । सबवन डिभिजन कार्यालय गुगौलीको गस्ती टोलीले साताअघि क्षति भएका सीमास्तम्भ फेला पारेको थियो ।
‘बाढीले एउटा सीमा स्तम्भ पुरिएको छ,’ सशस्त्र वनरक्षक नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘अर्कोको टुप्पो भाँचिएको छ ।’ ठूल्ठूला ढुंगाले पुरिएका छन् । स्तम्भ क्षतविक्षत छन् । सीमास्तम्भ रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख उपरीक्षक जनक पुरीले आफू नयाँ भएकाले बुझ्ने क्रममा रहेको बताए । बुझेर थप जानकारी दिने उनले सुनाए । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जग (फाउन्डेसन) कमजोर बनाउँदा स्तम्भ ढलेका हुन् । ‘मुस्किलले आधा मिटर पनि फाउन्डेसन छैन,’ विजयनगर–७ का वडाध्यक्ष दिनेश चौधरीले भने, ‘त्यही भएर टिकाउ भएन ।’
दुई मुलुकबीच सीमास्तम्भको संरक्षणमा बेवास्ता गरिएको उनले बताए । गत वैशाखमा स्तम्भ मर्मत र नयाँ गाडिएका थिए । दुई महिना नपुग्दै ढलेका हुन् । ठकुरापुरका अजय चौधरीले सरकारलाई यसबारे संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।
‘बाढी आउनासाथ स्तम्भलाई बगाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण मर्मत ढिलो गर्न हुन्न ।’ उक्त पिलर जहाँ गाडिएका थिए, त्यहीं गाड्न प्राविधिक टोली छिटो आउनुपर्ने स्थानीय राजेन्द्र यादवले बताए । ‘सीमास्तम्भ बगेर अन्तै पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०९:०७